फिदिममा खानेपानीको जहिले समस्या: करोडौको योजना,धारामा पानी धमिलो (भिडियो रिपोर्ट )
पाँचथर । चन्द्रकलाको डोको एक्लै छैन,डोको भित्र एउटा गाग्रो,चार पाँच ओटा पेप्सिका खाली बोतल,अनि जर्किन पनि छ । उनी करिब १ किलो मिटरको दुरि पार गरेर दिनभरिलाइ पुग्ने पानी लिन ट्यान्की धारा आएकी हुन । यो समस्या उनको मात्र पनि होइन फिदिम वडा नम्बर २ मा पर्ने (स्थानीयले चिनिने नाम ) दमाइ धारा ५ बर्षकि नानी बोतल थाप्दै डोकोमा भर्दैथिन । आमाले पानि थाप्न नभ्याएपछी ती नानी आमालाइ सघाउन आएकी हुन । यो समस्या चन्द्रकला र यी नानिको मात्र होइन र यो बर्षको मात्र समस्या पनि होइन । हरेक बर्ष बर्खा याम संगै फिदिममा यो समस्या देखिने गरेको छ । बर्खायाममा फिदिमबासीलाई मुहानको पानी लिन जान सास्ती छ । घरमा धारा नभएको पनि होइन घरको धारामा धमिलो पानी आएपछी घर देखि पर मुहानको पानी लिन जान बाध्य भएका हुन ।
बिहान ४ बजे देखि पानी लिन जाने को घुइचो हुन्छ । फिदिम साना सहरी खानेपानि तथा उपभोक्ता समिति ले लेदो पानि छान्ने मेसिन पनि नराखेको होइन । नेपाल सरकार बाट ५० प्रतिशत अनुदान, नगर बिकास कोषबाट ४५ प्रतिशत अनुदान र उपभोक्ता बाट संकलन गरि करिब १९ करोड लगानिमा छान्ने मेसिन पनि बनाएको छ तर बर्खायाम को लेदो पानी भने छान्न सकेको छैन । बालुवा, गिटि को प्रयोग गरि बनाएको छान्ने फिल्टर सामान्य आएको धमिलो पानी मात्र छान्ने र अलि लेदो आएको छान्न नसक्ने फिदिम साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका प्रमुख छवि कार्की बताउछन्र ।
२०५८ सालमा स्थापना भएको फिदिम साना सहरी खानेपानि तथा उपभोक्ता समितिको यो दोस्रो कार्य समिती भए पनि उपभोक्ताको समस्या जस्ताको तेस्तै छ । पानीको मुहानमा पहिला जङ्गल थियो मानिसको आवत जावत पनि थिएन अहिले गाडी गुड्न थाले पछि थप समस्या हुन थालेको कार्कि बताउछन ।
हरेक बर्ष खानेपानी,सरसफाइ उपभोक्ता समिती भने पनि नाम अनुसार को काम बिशेषत बर्खायाममा हुन सकेको छैन् । महिनाभरी को शुल्क तिरेर पनि उपभोक्ताले धमिलो पानी पिउन बाध्य भएका छन् । करडौ लगानी लगाएर स्वच्छ पानी न आउदा निराश हुनु स्वाभाविक हो । बिकाश निर्माणको कामले गर्दा उपभोक्तालाइ सङ्लो पानी खुवाउन पाएका छैनौ,गत साल मात्र नया प्रबिधी अफरिम फिल्टर बाट टृट्मेन्ट प्लान्टमा आइपुग्दा धमिलो पानी छनिन्थियो र समस्या हुदैन थियो तर यो बर्ष अबिरल बर्षाका कारण त्यो नया फिल्टर साइडको संरचना ध्वस्त भएको कारण धमिलो पानी आएको फिदिम साना सहरी खानेपानि तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गजाधर भट्टराई बताउछन् ।
फिदिम साना सहरी खानेपानी तथा सरसाफाइ उपभोक्ता समिती बाट उपभोग गर्ने लगभग २ हजार २ सय घरघुरिमा धमिलो पानी आउदा मुहान र उधोग बाणिज्री संघ बाट संचालनमा ल्याएको स्वच्छ खानेपानी मा भिड भै उपभोक्ताअ लाई सास्ती भएको हो। पानी पिउनको लागि मात्र होइन लुगा धुन,भाडा मस्काउन पनि प्रयोग गर्न नसकिने पानी आउदा उपभोक्ता निराश भएका हुन।घर देखि पर पानी ओसार्न सास्ती हुने मात्र होइन फोहोर, दुसित पानीले मानव स्वास्थ लाई समेत असर पुर्याउछ ।
बिगत लामो समय देखि एउटै समितिले खानेपानी बितरण गरिरहदा र हरेक बर्ष धमिलो पानी आइरहने समस्या भै रहदा स्थानिय सरकार,सरोकारवाला र राजनैतिक दल सधै मौन किन ? उपभोक्ताले कहिले सम्म शुल्क तिरेर सास्ती बिहोर्नु पर्न े? यस तर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।